किरात प्रदेश नै किन ? «
किरात प्रदेश नै किन ?
प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७५, सोमबार १४:४२
प्रदेश १ को नामकरण साझा बनाउने विषयमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ (कियाचु) ले आप्mनो १० औं महाधिवेशनको पूर्वसङ्घारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर किरातवादी शक्ति किरात राई यायोक्खा (किराया) सँग औपचारिक वार्ता थाल्ने बताएपछि एउटा सुखद विषयको सुरुवात भएको थियो । तर, महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा किराया र कियाचुबीच भएका ‘वार्ता’ हरू औपचारिक सिलसिलमामात्र सीमित भए । निकासको कुराभन्दा पनि आ–आफ्ना धारणा एकअर्कालाई सुनाउने काम भयो, जो पहिले नै पनि सुनाइसकिएको थियो । यतिबेला दुईवटै शक्ति आ–आप्mना धारणा बोकेर कित्ताकाटको स्थितिमा छन् ।
आप्mनो साङ्गठनिक नामको अगाडि ‘किरात’ जोडिएका किराया र कियाचु दुवैले आ–आप्mना महाधिवेशनबाट क्रमशः ‘किरात प्रदेश’ र ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को माग उठाएका छन् । दुवै शक्तिहरू प्रदेशको नामको सवालमा फरक देखिए पनि दाबी गरिएको भूगोल एउटै हुनुमा मिलनबिन्दुको अघोषित सङ्केत पनि देख्न सकिन्छ । एउटै भूगोलका दुई फरक नामका प्रस्तावकहरू एउटा कित्तामा उभिन सके पहिचानसहितको प्रदेशको नामाङ्कन साँच्चै नै सार्थक हुनेछ । अन्यथा, ऐतिहासिक अवसर गुम्ने निश्चित देखिन्छ ।
यी दुई शक्तिमध्ये लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्ने कियाचुको गतिविधि हेर्दा अहिले प्रदेश–१ मा साझा पहिचानी नामको लागि एउटै कित्तामा उभिन सक्ने देखिन्नँ । पहिचानी नामकरणको लागि साझा शक्ति बन्न एकीकृत हुनुपर्नेमा आ–आफ्नानै माग वा मुद्दा उराल्ने लयमा देखिएका छन् । जसले गर्दा ‘पल्टने भाग्य’ को कथा पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । त्यसैले कथाको पुनरावृत्ति हुन दिनुभन्दा माग र मुद्दाको सवालमा किरायाले उठाएको ‘किरात प्रदेश’ ऐतिहासिक, समाजिक, राजनीतिक तथा तार्किक रूपले जसरी पनि बहस गर्न सकिने र प्रवेश गर्न सकिने भएकाले यसैलाई पहिचानी नाम बनाएर जान आवश्यक छ । जसको बारेमा बहसको लागि तलका बुँदाहरू छलफल गर्न सकिन्छ ।
शाब्दिक रूपमा किरात
‘किरात’ शब्द आफैँमा विशाल अर्थ बोक्ने शब्द हो । शब्दार्थको रूपमा हेर्ने हो भने ‘किरात’ शब्द मनचिन्ते झोला हो । जहाँबाट जुन अर्थ लगाए पनि पाउन सकिन्छ । अर्थात्, बृहत् अर्थ दिने किरात शब्द कोही कसैले लेखक हुने धुनमा लेखेको आत्मज्ञानी इतिहास वा राजनीति गर्नको लागि आफूअनुकूल गरेको व्याख्या नभई हजारौं वर्षको कसीमा घोटिएर निरन्तर चलन वा व्यवहारमा आएको शब्द हो ।
त्यसैले ‘किरात’ शब्दले सभ्यता बोक्छ, इतिहास बोक्छ, संस्कृतिको मानक बन्छ र मनोविज्ञान नै पनि बोकेको छ । अहिले ‘किराती’ भन्ने बित्तिकै आम रूपमा बुझिने जुन विम्ब छ, त्यो विम्ब अहिले भर्खरै कोही कसैले उत्खनन् गरेर निकालेको वा चलाएको नभई हजारौं वर्षदेखिको निरन्तरताको सार बुझाइ हो ।
प्रा.डा. टङ्क न्यौपानेले मञ्चबाटै भाषण (०७२ असोज २) गरेर ‘किरात प्रदेश’ नाम प्रदेश क्रमाङ्क–१ को लागि ‘साझा हुने’ देख्नुमा सभ्यता, इतिहास, संस्कृति र मनोविज्ञानको सार रूप हो । वैदिक कालदेखिको लिखित व्याख्याको निरन्तरता र ऐतिहासिक रूपले प्रमाणित गरिएको तथ्यका कारण नै प्रा.डा. न्यौपानेजस्ता विद्वानहरू किरात प्रदेशलाई वैचारिक रूपले स्वीकार गर्न तयार रहेका छन् । वेदका ऋचाहरू हुन् वा पुराणका पानाहरू ‘किरात’ नामलाई कुनै न कुनै रूपले स्वीकार या व्याख्या गरिएको छ । जसलाई नचाहनेहरूले केही क्षणमात्र तोडमोड गर्न सक्छन् ।
भाषिक रूपमा किरात
माथि नै पनि भनियो, किराती भन्ने बित्तिकै आउने विम्ब अनुभूतिको गहिराइबाट आएको वस्तु होइन । यो विम्बको लागि हजारौं वर्षको निरन्तरता छ । यही निरन्तरता भाषाको सवालमा पनि लागू हुन्छ । ‘पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किराती’ (चटर्जी)१ को विम्बमा पर्नेहरूले बोल्ने भाषालाई पनि आम रूपमा किराती भाषा भनेर परिभाषित गरिएको छ । तुम्बाहाङ२ का अनुसार भाषिक रूपले हायु, सुनुवार, राई, याक्खा र लिम्बूहरू किरात भाषी अन्तर्गतको समूहमा रहेका छन् ।
तुम्बाहाङको यो स्वीकारोक्तिअघि नै भौगोलिक कोणबाट किरातीको बस्ती भएकोलाई ओल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भनिएको जिकिर इतिहासकार हड्सनले गर्दै आएका छन् । हड्सनको दाबी छ, ती तीन किरात क्षेत्रमा बोलिने अलग–अलग भाषिक विशेषता छन्, जसलाई समग्रमा किराती भाषा भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
अर्थात्, भाषा पनि हजारौं वर्षदेखिको अभ्यास हो । कोही कसैले भाषा बनाउँछु भनेर केही समयमै बन्दैन । यही भाषिक आधारमा पनि ‘किरात’ नाम जोडिएर आएको कुरा इतिहासले देखाएको छ ।
(१. चटर्जीः फ्रम ल्याङ्वेज टु डेभलपमेन्ट, २००९ः ३२
२.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, फ्रम ल्याङ्वेज टु डेभलपमेन्ट, २००९ः ३४)
सामरिक महत्वमा किरात
खम्बुवान स्वायत्तता माग राख्दै आएको गोपाल खम्बू अन्ततः सामरिक कारणले नै ‘गोपाल किराती’ भएर देखा परेका हुन् । वि.सं. २०५८ सालभन्दा अगाडि दुई बेग्लै सङ्गठन खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनयुद्धमा थिए । ती फरक २ सङ्गठनको एकीकरणपछि साझा नाम ‘किरात राष्ट्रिय मोर्चा’ राखिएको थियो ।
त्यसबेला गोपाल खम्बूले स्वतन्त्र रूपमा हाँकेको अरुणपारीको खम्बुवानी लडाइँ जीर्ण र छिन्नभिन्न हुँदै गइरहेको थियो । यसैगरी, अर्काेतिर माओवादीको संलग्नतामा भक्तराज कन्दङ्वाले हाँकेको अरुणवारीको लिम्बुवानी लडाइँ प्रचारमुखी र नामको कागजी बाघ थियो ।
क्रान्तिलाई एकीकृत रूपमा उठाउन आवश्यक भएको ठानेर नै २ शक्ति मिलाएर नयाँ शक्ति ‘किरात राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माण गरिएको थियो । २ शक्तिको मिलनपछि जन्मिएको नयाँ शक्तिले नै महान् जनयुद्धको क्रममा पूर्वको विभिन्न स्थलहरूमा ठूला–ठूला हमला गर्न सफल भएको थियो । अर्थात्, सामरिक रूपमा खम्बुवान र लिम्बुवानको शक्ति किरातमा एकीकृत भएको थियो ।
गोपाल किरातीले ‘किरात राष्ट्रिय मोर्चा’ को गठनपछिको भेटमा यो पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ‘साना शक्तिहरूमा विभाजित हुँदा शत्रुले दुवाली थापेजस्तो कम मेहनेतमै हाम्रो मुक्तिको अभियानलाई ध्वस्तमात्र होइन कहिले पनि उठ्न नसक्ने बनाउँछ । त्यसैले शक्ति एकीकृतको लागि नयाँ सङ्गठन बनाइयो ।’
महान् जनयुद्धभरि ‘किरात’ नाममा जति शक्ति वा उत्साह देखिएको थियो, अघिल्ला समयमा त्यस्तो देखिएको थिएन । भनिन्छ, पूर्वका ठूला–ठूला फौजी हमला किरात नाममा शक्ति एकीकृत हुनुको परिणाम थियो । त्यसैले अहिले पनि प्रदेशको पहिचानी नामकरणको लागि वा शक्ति एकीकृत गराउन ‘किरात’ शब्द साझा हुने देखिन्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको प्रदेश क्रमाङ्क–१ मा पूर्वी नेपालका १४ जिल्ला समेटिएको छ । सरकारको यो घोषणा करिब–करिब किरायाले प्रस्ताव गरेको १६ जिल्लाको ‘किरात प्रदेश’ सँग निकै नजिकको सम्बन्ध राख्छ । अर्काे किरातवादी शक्ति (साङ्गठनिक नामको अगाडि किरात जोडेको हुनाले) कियाचुले भने ९ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेको छ । राजनीतिक रूपमा माग वा मुद्दा आ–आप्mना हुन सक्लान् । तर, न्यूनतम रूपमा प्रस्तावको वरिपरि हुने गरी आएको अर्काे प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।
‘नौ नम्बर’ को नै जुत्ता खोज्नु राजनीतिक रूपले अडानको विषय वा कार्यकर्तालाई भावुक बनाउने आधार हुन सक्ला तर सम्भावनालाई बुभ्mन भावुक होइन कठोर विश्लेषण र चेतना आवश्यक हुन्छ । नौ नम्बरको जुत्ताको लागि बनिसकेको १४ नम्बरलाई आप्mनो आकारमा ल्याउनुपर्छ । जो भावनात्मक रूपले सजिलो देखिए पनि व्यवहारिक रूपले उत्तिकै कठिन र दुरुह पनि छ । महान् जनयुद्धकै क्रममा दुई शक्ति एक हुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको १४ जिल्लाको प्रदेशबाट ५ वटा हटाएर के गर्ने ? वा कसलाई दिने ? यसको वैज्ञानिक र तार्किक जवाफ नभएसम्म ९ नम्बरको जुत्ता बनाउने अभियान बौद्धिक घेराबन्दीमा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, फरक मत राख्दै तत्काललाई साझा नाममा जान सके पहिचानवादी नामको सवालमा निर्णायक बन्न सकिन्छ । त्यो साझा नाम ‘किरात’ बाहेक अन्य हुन सक्दैन ।
‘पल्टने भाग्य’ को कुरा
यो पङ्क्तिकार सानो हुँदा सुनेको पल्टने (लाहुरे) को कथा हो । त्यसबेला पल्टनेहरू ३ वर्षमा मात्र पल्टनबाट घर फिर्न पाउँथे । त्यसपछि मात्र उनीहरूले आप्mनो परिवारलाई साथमा लिएर पल्टन जान पाउँथे । कथाअनुसार पल्टन जानुअघि विवाह गरेका पल्टनेले छुट्टीमा घर फर्कने क्रममा बाटोमा अर्की केटीसँग विवाह गरेछ ।
पल्टनेको बिदा सकिएपछि पल्टन जाने कुरामा पल्टनेकी जेठी र कान्छी श्रीमतीबीच विवाद भएछ । दुवै श्रीमतीले पल्टन जाने कुरामा आ–आप्mना अडान छाडेनन् । त्यसपछि निर्णय गर्ने जिम्मा पल्टने श्रीमान्को काँधमा आइलागेछ । उनले अर्काे प्रस्ताव गरेछन्, पल्टन लानको लागि अब अर्की श्रीमती बिहे गर्ने ।
दुवै श्रीमतीले पल्टने श्रीमान्को प्रस्ताव यो अर्थमा स्वीकार गरेछन् कि–दुवैलाई लागेछ, मैले त्यसको सेखी झारिदिएँ । पल्टनेको भागमा तेस्री श्रीमती परी र उसैले नै पल्टन जाने मौका पाई । जेठी र कान्छीबीच सहमति हुँदो हो त, पल्टनेको पारिवारिक विवरणमा पल्टन लगेको पहिलेकी श्रीमती मरेकी हुनाले अर्की श्रीमती विवाह गरेर ल्याएको भन्न पाइन्थो ।
यसो गर्दा दुवै जना श्रीमती पालैपालो पल्टन जान पाउँथे । तर, पल्टन जाने मौका दुवैले पाएनन् र तेस्री श्रीमतीले पाई । हो, अहिले दुई किरातवादी शक्तिहरू पनि यसरी नै पल्टनेसँग को पल्टन जाने ? भन्ने कुरामा अड्डी लिएर बसेका छन् । आ–आप्mनो अड्डीले पल्टनेलाई अर्काे मौका मिल्ने स्थिति देखिएको छ ।
यो बेला दुई किरातवादी शक्तिले को पहिला पल्टन जाने भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि साझा बिन्दु नै खोज्नु उत्तम हुन्छ । यसको लागि कुनै पनि शक्तिले आप्mनो ‘मुद्दा ओझेलमा पर्ने’ जस्तो तर्क पाल्नुहुन्न । आपूmले प्रस्ताव गरेको नाम अस्वीकार भयो भने आपूm निकटको शक्तिलाई भए पनि स्वीकार गर्ने फराकिलो मन बनाउन सक्नुपर्छ ।
भारतमा सङ्घीय प्रदेशको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५० जनवरी २६ मा प्रदेश घोषणा भएको आसामबाट मेघालय (सन् १९७२ जनवरी २१) र मिजोरम (सन् १९८७ फ्रेबुअरी २०) जस्ता २ अर्काे सङ्घीय राज्य बनेको इतिहास छ ।
पटकपटकको एकीकृत आन्दोलनकै कारण सन् १९५३ अक्टोबर १ मा घोषणा भएको आन्ध्र प्रदेशबाट तेलङ्गना (सन् २०१४ जुन २) छुट्टिएर भारतको २९ औं प्रदेश भएको छ ।
त्यसो त किसान वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै थालिएको चिनियाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफल बनाउन माओत्सेतुङले आवश्यकताअनुसार आप्mनै विरोधी शक्ति च्याङकाइ शेकसँग पनि हात मिलाएका थिए । त्यो हात मिलाइपछि नै जापानविरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलन सफल भएको थियो ।
अहिले ‘किरात प्रदेश’ भन्दा फरक नाम सदनले पारित ग¥यो भने भविष्यमा सो प्रदेशको पहिचानी नाम बनाउन निकै जटिल हुन्छ जति पहिचानी नाम ‘किरात प्रदेश’बाट अर्काे पहिचानी प्रदेश बनाउन सजिलो हुन्छ । त्यसो भए एउटै किरातवादी शक्ति ‘किरात’ नाममा किन एकीकृत शक्ति नबनाउने ? एउटै शक्ति किन हात नमिलाउने ?
याे लेखककाे निजी विचार हाे । सं . प्रदेशपोर्टल बाट लिएको हो ।